The Blue Whisper ဒဏ္ဍာရီလာ ရှေးဟောင်းဇာတ်လမ်းကတော့ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Dilireba နဲ့ Ren Jialun တို့ရဲ့ ပထမဆုံး တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းဝတ္ထုကတည်းက နာမည်ကြီးလူကြိုက်များတာကြောင့် လူသားပုံစံနဲ့ Live Action ရိုက်ကူးသွားမယ်ဆိုကတည်းက တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကတော့ မိစ္ဆာလေ့ကျင့်ပေးသူ သခင်မနဲ့ ငါးမန်းမိစ္ဆာ(ရေသူထီး) ကြားက ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၃ လအတွင်း ငါးမန်းမိစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြီးသတ်လုပ်‌ဆောင်ရမယ့် တာဝန် (၃) ခုကို ထမ်းဆောင်ထားရတဲ့ သခင်မ ဟာ သနားမိရာကနေ ကြင်နာချစ်ခင်မှုတွေ ရင်မှာ ပေါက်ဖွားဖြစ်တည်လာတဲ့အခါ.. မတူညီတဲ့ မျိုးနွယ်နှစ်ခုဖြစ်ကြားက အချစ်တစ်ခုဟာ ထိန်းချုပ်မှုတွေကြား အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါ့မလား?
ထုံးစံအတိုင်း အခက်အခဲတွေရှိမှာလည်း ဖြစ်သလို အဆုံးသတ်ဇာတ်သိမ်းက ကောင်းမွန်ပါ့မလား? ဆိုတာကိုလည်း စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။ အောက်တိုလာဘ (၂၀) ရက်နေ့မှာပဲ YOUKU ထုတ်လုပ်ရေးက ဇာတ်လမ်းအတွက် ပထမဆုံး Trailer နဲ့အတူ ဇာတ်ကောင်တွေအားလုံးရဲ့ Stills တွေကို ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Trailer ကိုကြည့်ပြီး ဇာတ်လမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ လူအများက တဖန်ပြန်လည်ခေတ်စားလာပြီး လူပြောများနေပါတော့တယ်။ နဂိုကတည်းက ရှေးဟောင်းဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ နာမည်ကြီးကြတဲ့ Dilireba နဲ့ Ren Jialun တို့ရဲ့ပေါင်းဆုံတွဲဖက်မှုကြောင့် သဘောကျနေကြတာလည်းဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုကျ ရှေးဟောင်းဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး ကွဲထွက်အောင် ရိုက်ကူးထားမလဲဆိုတာကိုလည်း စိတ်ဝင်တစား ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ ထုတ်လွှင့်ပြသမယ့်ရက်ကတော့ အတိအကျမထွက်လာသေးပေမဲ့ ၂၀၂၂ အတွင်းမှာ ကြည့်ရှုရဖို့ မျှော်လင့်နေကြပါတော့တယ်။
Next တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ကဏ္ဍတိုင်းမှာ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး K-Pop အဆို​တော်​တွေအဖြစ် ​ရွေးချယ်ခံလိုက်ရတဲ့ BTS »
Previous « Variety Show ​တွေမှာ မပါ​တော့တဲ့အပြင် လက်ခံထားတဲ့ ဇာတ်ကား ၃ ခုပါ ရိုက်ဖြစ်ဖို့ မ​သေချာ​တော့တဲ့ Kim Seon Ho